Xogta Suuqa Qeybtii Koowaad ee Musqusha la safeeyey ayaa la siidaayay! Musqusha Kohler, Basin, Qubayska Saddexda Kaalinta Koowaad!
Bogga ugu weyn / blog / Xogta Suuqa Qeybtii Koowaad ee Musqusha la safeeyey ayaa la siidaayay! Musqusha Kohler, Basin, Qubayska Saddexda Kaalinta Koowaad!
2021 / 08 / 21 Qoondayntablog 1969 0
Maqaalkani wuxuu ku salaysan yahay warbixinta warshadaha ee ay sii daysay Shabakadda Aowei Cloud
Dhowr maalmood ka hor, madal xogta dhinac saddexaad AVC ayaa soo saartay warbixin kooban oo ku saabsan suuqa H1 ee Hantida Shiinaha ee alaabada fayadhowrka ee aadka loo qurxiyey sanadka 2021.
Xogta dabagalka AVC waxay muujineysaa in qeybtii hore ee 2021, tirada mashaariicda dhowaan la furay ee dhammeystirku ay ahayd 1,490, hoos u dhac 8.9% ah sannad-kiiba. Cabbirkiisu wuxuu ahaa 1,237,500, hoos udhacay 12% sanad walba Sida badeecad caadi ah oo ku jirta suuqa qurxinta ee la safeeyey, baaxadda suuqa ee qalabka musqusha iyo suuqa weyn ayaa ah kuwo joogto ah. Iyadoo la tixgelinayo kororka sii socda ee siyaasadaha kontoroolka adag ee qeybtii labaad ee sanadka, suuqa ayaa la filayaa inuu waxoogaa kor u kaco qeybta labaad ee sanadka, iyo kala -guurka wuxuu noqon doonaa mid hagaagsan sanadka oo dhan.
Qeybtii hore ee 2021, miisaanka taageeraya musqusha, weelka lagu dhaqo iyo qubeyska wuxuu ahaa 1.234, 1.234 iyo 1.232 milyan oo ah siday u kala horreeyaan. Hoos -u -dhaca miisaanku wuxuu la mid yahay hoos -u -dhaca weyn ee la sifeeyay. Iyaga dhexdooda, Kohler ayaa kaalinta koowaad ka galay musqusha, weelka wax lagu dhaqo, astaanta qubeyska oo keliya.
Gaar ahaan, qaybta musqusha, Kohler ayaa kaalinta koowaad gashay oo leh saamiga 36.1%. Saamiga TOTO wuxuu ahaa 12.3%, isagoo galay kaalinta labaad. Avanosei, oo ah astaan ​​ay leedahay Beerta Dalku, ayaa gashay kaalinta saddexaad oo leh saamiga 8.7%.
Baahida loo qabo musqulaha caqliga badan waa mid heerkeedu aad u sarreeyo oo wuxuu gaaray 27%. Xogta dabagalka AVC (AVC) waxay muujineysaa in qeybtii hore ee 2021, miisaanka iswaafajinta ee musqulaha caqliga leh ee suuqa dhammeystirka guryaha uu ahaa 334,000 oo set, koror ah 41.4% sannadkiiba. Heerka isbarbar dhiga wuxuu ahaa 27%, oo kor u kacay boqolkiiba 10.2 dhibcihii isla muddadii sanadkii hore. Mustaqbalkeeda mustaqbalka waa mid rajo leh.
Saddexda ugu sarreeya dhulka musqusha ee caqliga leh ayaa sidoo kale ah Kohler, Avanosei iyo TOTO. saamiyadooda waa 24.6%, 23.5% iyo 15.9% siday u kala horreeyaan.
Barkadda lagu maydho, Kohler wuxuu ku xisaabtamay 33.6%, isagoo kaalinta koowaad galay. Saamiga Avanosei wuxuu ahaa 12%, isagoo galay kaalinta labaad. Saamiga TOTO wuxuu ahaa 8.9%, isagoo galay kaalinta saddexaad.
Kooxaha qubeyska Kohler ayaa kaalinta koowaad galay oo leh saami dhan 26.8%, Moen ayaa galay kaalinta labaad oo leh saami dhan 18.4%, TOTO ayaa gashay kaalinta saddexaad oo leh saami dhan 7.9%.
Kobaca isbeddelka ee qaabeynta qubeyska. Qeybtii hore ee 2021, qiyaasta u dhiganta bambooyinka qubayska ee suuqa dhammeystirka hantida ma guurtada ah waxay ahayd 929,000 oo set, 6.1% sannad-sano. Heerka u -dhiganta ayaa ahaa 75.1%, oo ah koror boqolkiiba 12.8 ah isla muddadaa isla sannadkii hore.
Marka laga eego qaabka tartanka astaanta, u -fiirsashada sumcadaha bambooyinka qubeyska ee suuqa dhammaadka ayaa sarreeya. Shanta summadood ee ugu sarreeya waxay leeyihiin wadar dhan 60.5%. Saamiga Opple wuxuu ahaa 23.3%, wali waa kan ugu sarreeya, saamiga Mingzu wuxuu ahaa 12.6%, wuxuu galay darajada labaad, saamiga Opple wuxuu ahaa 12%, isagoo galay kaalinta saddexaad.
Armaajada musqusha waxaa ku badan habaynta. Qeybtii hore ee 2021, baaxadda xirmada golaha musqusha waxay ahayd 1.208 milyan oo unug. Heerka qoondaynta ayaa waxoogaa korodhay isla muddadii sannadkii hore, oo gaadhay 97.7%. Iyada oo laga eegayo tartanka astaanta golaha musqusha, alaabada la habeeyay waxay qabsadeen ku dhawaad ​​60% suuqa golaha musqusha, iyagoo gaaray 57.7%.
Chikumi -ka Casriga ah ee Beerta Wadanka ayaa kaalinta koowaad ka galay saamiga oo leh 7.1%. Oppein wuxuu galay kaalinta labaad isagoo leh saami dhan 4.7%, halka Zbom uu galay kaalinta saddexaad isagoo leh 3.8% saami.
Hore:: Sida Loo Doorto Golaha Wasiirada Musqusha? Xusuusnow 3 -daan Qodob, Khasab ma ahaan doontid! Next: Dib-u-eegista Kuleyliyaha Degdegga ah ee Micoe Balcony Tamarta Kaydinta Biyaha Tamarta “Smart PRO